Iincwadi ezigqwesileyo zobunyani bobunyani | Uncwadi lwangoku
UAlberto Legs | | Ababhali, Iintlobo, Iincwadi, Inoveli, Ezahlukeneyo
Nangona kukho amazwe amaninzi kunye nababhali abadibanise intelekelelo kunye nenyani kwimbali, ubunyani bobugqi buvele njengophawu loncwadi lwaseLatin American kwaye kamva lwandiselwa kwihlabathi liphela. Isakhono sokudibanisa ukulala kunye nobomi bemihla ngemihla ngezi Iincwadi ezilungileyo zobugqi ezisibuyisela kwezo dolophu zezidalwa ezibhadulayo kunye neentsapho ezizele ngabantu.
1 UPedro Páramo, nguJuan Rulfo
2 UAura, nguCarlos Fuentes
3 Iminyaka Elikhulu yokuba wedwa, nguGabriel García Márquez
4 Indlu yeMimoya, ngu-Isabel Allende
5 Njengamanzi etshokholethi, nguLaura Esquivel
6 Kafka kunxweme, nguHaruki Murakami
7 Oonyana bobusuku bobusuku, nguSalman Rushdie
UPedro Páramo, nguJuan Rulfo
Ngo-1953, uJuan Rulfo waseMexico wapapasha uthotho lwamabali abekwe kwidolophu eyintsomi yaseComala phantsi kwegama El llanero en llamas. Umzobo wokuqala wendalo engummangaliso edibanisa UPedro Paramo, Enye yeenoveli eyabethelela ubunyani njengoluhlobo lwabantu kwaye yabhalwa kwiinyanga nje ezintlanu ngumbhali. Ishicilelwe ngo-1955, ibali isixelela ukufika lo mfana UJuan Preciado Kwidolophu eseComala apho alele khona utata wakhe, uPedro Páramo. Ukuthula kwiikona kunye namabali amadala abantu beza kuncipha isamente le mbali ithathwa njengenye ye Iincwadi eziphambili kwifayile yamaLatin aseMelika.
UAura, nguCarlos Fuentes
Ukuhlala kwiSixeko saseMexico ngo-1962, aura landela emanyathelweni kaFelipe Montero, umbhali-mbali oselula ogqiba kwelokuba amkele umsebenzi wokugqibezela izikhumbuzo zekhaya eliqhelekileyo. Uya kuhlala iinyanga kunye nenkosikazi yakhe, uConsuelo, kunye nomtshana wakhe, u-Aura, abafazi ababini abahlala emanzini abaphantsi ukuze bangayiboni indlu ebakhumbuza kakhulu umntu ogulayo. Uhambo lokulalisa ngomnqweno, uxinzelelo kunye neenjongo ezimnyama zabalinganiswa balo apho kunqongophala khona izithethe zokomoya kunye neminqweno eyimfihlo. Enye yeenoveli ezikhunjulwayo zikaCarlos Fuentes, ezapapashwa ngokujikeleza ngokupheleleyo kobugqi.
Bathi xa uGabo ebhala le noveli, wayenemali. Wathengisa imoto yakhe, wazimela kwigumbi elikwisiXeko saseMexico, ekugqibeleni wathumela umbhalo-ngqangi kwindlu yokupapasha yaseSudamericana ngo-1967. impumelelo enkulu que Iminyaka eyikhulu yedwa onamava phakathi kweeveki zokuqala zokukhutshwa, kungaphantsi kobume be- Umsebenzi wobugcisa woncwadi waseLatin American owawuza kuthi ekugqibeleni ufikelele. I-X-ray yelizwekazi lemilingo, usapho kunye neempembelelo zangaphandle, imbali ye Usapho lakwaBuendía kunye nedolophu yaseMacondo yaba lilitye lembombo le-boom yaseLatin American eyathatha umhlaba kwii-60s.
Indlu yeMimoya, ngu-Isabel Allende
I-Chilean ngokuzalwa kunye ne-Venezuela ngokwamkelwa, u-Allende wayehlala eyazi indlela yokuluka ubunyani belizwekazi lakhe, ngakumbi i-Chile, ebadibanisa nomlingo wobunyani obufihlakeleyo le noveli yapapashwa ngo-1982 ukuya kwimpumelelo ebalulekileyo kunye noluntu. Indlu yeMimoya usazisa izizukulwana ezine zosapho lakwa Trueba kunye namabali abo ahlanganiswe neziganeko zopolitiko ezikhathaza i-postconial Chile. Kucingwa ukuba ngowona msebenzi ubalulekileyo wombhali, inoveli yayinayo uhlengahlengiso kwifilimu ngo-1994 eneenkwenkwezi uJeremy Irons, uMeryl Streep no-Antonio Banderas.
Xa kwakubonakala ngathi "intshinga" yokwenyani yomlingo ifikile esiphelweni, yeza Njengamanzi eTshokholethi ukubonelela ngomkhenkce oyimfuneko. Ukuhamba ngesiko laseMexico ukungena ekhitshini kunye nokubetha umlozi kwimilingo yabo, inoveli kaLaura Esquivel eyapapashwa ngo-1989 waba ngumthengisi omkhulu ngenxa yokusebenzisa izithako ezifanelekileyo: ibali lothando kwimvukelo yaseMexico, idrama yomfazi ongenalungelo lokuthandana kunye neeresiphi ezilungileyo zaseMexico zokuphumelela abathandi kunye nabafundi. Inxalenye yesibini yenoveli, Idayari kaTita, yapapashwa ngo-2016.
Kafka kunxweme, nguHaruki Murakami
Ewe, ubugqi bokwenyani bubonisa oonobumba besiLatin baseMelika, kodwa oko akuthethi ukuba abanye ababhali kwihlabathi liphela abalutshintshanga indibaniselwano ye umlingo kunye nenyani kwimibhalo yakhe. UMurakami waseJapan ngoyena mzekelo ubalaseleyo, esahlula incwadi yakhe yencwadi ekubhaleni kuyo iinoveli ezisenyongweni kunye nabanye abadlala neyunivesithi. Incwadana yakhe ka-2002 Kafka elunxwemeni yeyona inoveli ivusa elona hlabathi limnandi ngamehlo abalinganiswa ababini kunye namabali abo ahlukeneyo: UKafka Tamura, umfana oneminyaka eli-15 ubudala ogqiba kwelokuba alishiye ikhaya lakhe aye kuzimela kwithala leencwadi, kunye noSatoru Nakata, ixhego elinamandla okuthetha neekati. Kubalulekile.
Indiya Lelinye lawona mazwe awodwa kwihlabathi apho umlingo kunye nokomoya kuyindalo ekuziphatheni kwabantu bayo. Yiyo loo nto, singothuki yinkcitho yamabali kaRushdie, ngakumbi Abantwana bobusuku. Incwadana ebekwe phakathi kobusuku ngo-Agasti 15, 1947, umhla i-India yafumana inkululeko kwi-Britane kwaye apho uSaleem weSinayi, ophambili ebalini, weza emhlabeni. Ngebali lakhe, elo lomntwana ophuhlisa ubuchule obunomdla, singqina imbali yakutshanje yaseIndiya kunye nesizukulwane esitsha esizimisele ukubuyisela eli lizwe licela umngeni kubakhenkethi nakwabafundi.
Yapapashwa ngo-1987, Bathandwa es inoveli enikezelwe kula makhoboka "angamashumi amathandathu ezigidi nangaphezulu" amakhoboka emvelaphi yaseAfrika osweleke emva kokuba ethotyelwe ngaphesheya kweAtlantic. Iinyani zembali ezimelwe nguSethe, umfazi olikhoboka ogqiba kwelokuba abaleke nentombi yakhe evela kumasimi eKentucky apho bahlala khona njengamakhoboka ukuze bafike eOhio, ilizwe elikhululekileyo. Iziporho kunye nezoyikeka zomnqamlezo othetha ngazo zonke ezo zithulisi zithi amashumi eminyaka ziye zatshonisa amadoda okhohlakeleyo kunye noncwadi ngokwalo. Ishicilelwe ngo-1987, inoveli yaphumelela ibhaso lePulitzer kunyaka olandelayo kwaye wahlengahlengiswa kwi-cinema kunye no-Oprah Winfrey kwindima kaSethe, umlinganiswa osekwe kwikhoboka uMargaret Garner.
Zeziphi ezona ncwadi zibalaseleyo malunga nobunyani bobugqi ozifundileyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iincwadi ezilungileyo kakhulu zomlingo
Umgcini ovuthayo sitsho
U-Llanero ovuthayo akazange aye eComala, de kwaba li-55 xa yayisekwayo, wayenobushushu besithathu. Ithafa, kwelinye icala, hayi kuba lingenako ukuhamba.
Phendula kwiRanger Ranger